I-InVision: Prototyping, Collaboration and Workflow | Martech Zone
I-InVision: Prototyping, Collaboration and Workflow
NgoMgqibelo, ngoMeyi 30, 2015 NgoLwesithathu, Juni 17, 2015 Douglas Karr
Muva nje, ngithole i-imeyili enesixhumanisi phezulu esisho ukuthi abantu baklama i-imeyili entsha futhi bafuna impendulo yethu. Ngichofoze isixhumanisi futhi bekuyisibonelo esifinyeleleka esidlangalaleni sokwakheka kwe-imeyili okusha yinkampani. Ngenkathi ngihlola ikhasi, bekune-hotspots enezinombolo (imibuthano ebomvu) engachofozwa futhi impendulo ethize inikezwe abantu abavakashela leli khasi.
Ngichofoze indawo eyodwa lapho bengicabanga ukuthi kungaba khona ukuthuthuka okuthile, kwavula ingxoxo ukuze ngifake impendulo yami bese icela igama lami nekheli le-imeyili. I-interface yomsebenzisi ayidingi imiyalo - bengazi ngokunembile ukuthi yini engingayenza.
Ipulatifomu yayiyinhle kangangokuba kwakudingeka ngivakashele ikhasi lasekhaya, Ukubuka. Ungazama ipulatifomu yephrojekthi engu-1 ngaphandle kwezindleko bese amaphrojekthi alandelayo adinga imali ekhokhwa njalo ngenyanga. Zonke izinhlelo zabo zifaka ukubethela kwe-SSL okungu-128 bit kanye nezipele zansuku zonke.
Ukubuka ivumela abasebenzisi ukuthi balayishe ukwakheka kwabo futhi bangeze izindawo ezidonsela kuzo ukuguqula izikrini ezimile zibe izindlela ezichofozekayo, ezisebenzisanayo eziphelele ngokushukuma komzimba, ukuguquka, nokugqwayiza. Izici zifaka ukulawulwa kwenguqulo, ukuphathwa kwephrojekthi kanye ne-prototyping yakho kokubili iwebhu, iselula nethebhulethi, ikhono lokwethula nokwabelana ngemiklamo, nethuluzi lokuchofoza nokuphawula lokuqoqa impendulo ngemiklamo.
Tags: ngokubambisanaukubambisana kokuklamaukumenywauhlelo lokusebenza lokungeniswai-prototypingdesign webukuphathwa kwephrojekthi yewebhuukuqhutshwa komsebenzi
Douglas Karr Saturday, May 30, 2015 Wednesday, June 17, 2015
Ngabe Izikhangiso Zakho Zevidiyo Ziyabonakala?
Isimo Samanje se-B2B Marketing Automation